lundi, 18 septembre 2017 22:55
Vangaindrano: Lehilahy hita faty tao anaty tanimbary
Rangahy iray sahabo 55 taona no hita faty tao anaty tanimbary manamorona ny lalana makany Ranomena eo amin'ny 6km mivoaka ny tanànan'i Vangaindrano androany alatsinainy 18 septambra maraina.
Tsy nisy ratra, tsy nisy mangana daroka ka heverin'olona fa vokatry ny hamamoana. Tsy misy mahafantatra azy ity anefa ny mponina manodidina eo.
Matetika raha fatin'olona tsy misy mahafantatra io dia ireny jiolahy tratry ny fitsarambahoaka ireny raha aty Vangaindrano, ity anefa tsy nisy ratra na daroka.
lundi, 18 septembre 2017 22:18
HJRA: Mitia et Fitia en bonne santé
Après l'opération lourde de séparation des siamoises le 13 septembre dernier à l'hôpital HJRA, les deux petites filles se portent bien. Mitia et Fitia partageaient le cordon ombilical, et elles étaient collées au ventre.
Les équipes de chirurgiens et médecins ont tenu ce jour une conférence de presse rapportant les détails de l'opération réussie avec une équipe entièrement malagasy.
lundi, 18 septembre 2017 14:16
Vohiposa RN7: Haverina ato anatin'ny 24 ora ny fifamoivozana
Mandroso ny asa hamerenana ato anatin’ny 24ora ny fifamoivozana amin’ny lalam-pirenena faha-7, vokatry ny fahatapahan’ny tetezana tao Vohiposa. Mifanome tanana amin’izany ny Ministeran'ny Asa Vaventy sy ny Vondrona Eorôpeana ary ny ARM.
lundi, 18 septembre 2017 14:15
Fianarantsoa: Mbola maharitra roa herinandro ny tahirin-tsolika
Mampitebiteby ireo mpampiasa solika aty amin'ny ilany atsimon'ny Nosy ny fahatapahan'ny tetezana ao Vohiposa.
Raha ny zava-misy notaterin'ny mpitandro filaminana aty an-toerana dia tsy mbola misokatra ny lalana amin'io toerana io ary tsy afaka miampita ny fivilianana ireo fiarabe toy ny mpitatitra solika.
Ampy hamatsiana solika hatrany Sakaraha mandritra ny roa herinandro ny tahiry ao amin'ny toby Ambalakely Distrikan'i Lalangina hoy ny tompon'andraikitra ifotony.
Ho an'ny famatsiana an'Ambositra kosa dia anjaran'ny rantsana ao Antsirabe no mamatsy ny ao an-toerana mandrapahavitan'ny lalana raha Fianarantsoa no miandraikitra izany amin'ny ankapobeny.
lundi, 18 septembre 2017 09:03
JLM: Tsy ekena ny tsy maty manota
Manoloana ireo fikasana hikasika ny Lalampanorenana sy ny resaka fampihavanam-pirenena, dia nanao fanambarana ireto tanora mikambana ao amain'ny JLM na ny Jery Lavitra ho an’I Madagasikara, fa tsy ekena ireo fikasana ametraka ny tsy maty manota eto amin'ny Firenena.
lundi, 18 septembre 2017 08:17
Kolotsaina: Taom-baovao malagasy
Hisy ny fihaonam-be ataon’ireo Raiamandreny ara-drazana manerana ny Madagasikara ny 21 septambra ho avy izao izay hatao eny Ambohimanga Rova. Hanomboka ny 19 septambra izao dia efa hisy ny fihaonana, ary izany no fotoana izay hanomezana ny firaisam-pirenena ara-drazana eto Madagasikara.
Ny faha 22 septambra kosa dia ho ambara ampahibemaso ireo dinika tapaka mandritry io fihaonana io ary hisy ny fitokanana ny tsangam-baton’ny firaisam-pirenena izay hiafara amin’ny alim-pandihizana izay atao ao amin’ny lapan’ny Tanàna.